Shotcrete xereen QSP30A baabuur - Shiinaha Qingdao CO-NELE Group
Shuruudaha Payment: TT, LC or 30%TT+70% TT or LC
Max saarka teori: 25m3 / h 30m3 / h
Output Cadaadis: 8Mpa
dhululubada ah dia. × Stroke: Φ160 * 1000mm
xereen height: 16
width ku xereen: 26.8m
dunmiiqa wareeg axial xagal: 360 °
Kaca 2.Beerta ansixiyeen symmetrically diyaarin qaab-dhismeedka.
Kaca 3.Beerta bedbeddelaan kartaa ± 45 °, waxay kordhin kartaa felxibility ee farsamo jet ah si loo hagaajiyo meesha ku xereen.
Reducer 4.Rotary ATS nooca turbo farsamo hoos marsho, ratio hoos weyn, awoodda is-quful xoog, Xuddunta ah wax soo saarka weyn, oo deggan isku halaynta operation.high siman
model Unit KNL5160TPJ-30A dhimaya
The dhexroorka oo dhan mishiinka Qaab dhismeedka Boom Waaweyn iyo kuwo yaryar dalkaUganda gacanta iyo cudud yar iskala
height xereen m 16
width ku xereen m 26.8
gacanta Big xagal dalkaUganda 0-60 °
gacanta Small xagal dalkaUganda + 15 ° -35 °
Boom xagal wareeg + 300 °
gacanta duulaya xagal lulid siman + 45 °
axial dunmiiqa xagal wareeg 360 °
Dunmiiqa xagal lulid axial toosan 240 °
Biiyaha xagal lulid + 4 °
taako lugta Front mm 2.3 ~ 3.7
taako lugta Rear mm 2.6
Halbeegga System Front iyo taako lugta gadaal mm 5100
mode drive darran Diesel engine
Motor awood qiimeeyo kw 55
danab V 380
awoodda ku xereen la taaban karo M3 / h 30
cadaadis ku listo MPA 10
dhexroor la taaban karo dhululubo * stroke mm Φ160 * 1200
dia dhululubo Oil. * dia ul. * stroke mm Φ100 * Φ80 * 1200
dhexroor Output mm Φ125
dhexroor biibiile Delivery mm Φ80
dhexroor biiyaha mm Φ50
beegyada uu kombaresarada Air (optional) 12m3 / min, 0.8Mpa
jiifku dhimaya model CDW1160HA1R5
saldhig wheel mm 5000
awood engine kw 136 (186hp)
file gear 8 geerka (xawaaraha sare iyo hoose)
xawaaraha ugu badan Km / h 80
awoodda Grade 30%
Shiidaalka taangiga mugga L 200
heerarka warshadu hawada Qiiqa Nation V
aragti oo dhan mm 9200x2460x3670
A. Front iyo gadaal lugta ku taako waa weyn, ka shaqeeyaan xasiloonida.
1. lugta hore
Wax yaalaha dhululubo telescopic + nooca-H lugaha siman, lugaha taako waa weyn yahay, sida uu sheegay goobta dhismaha, siday u kala horreeyaan, xakameeyo dhererka lugta ku ool ah kor u qaadi kara xasilloonida iyo ammaanka qalabka.
lugta gadaal 2.Beerta
Wax yaalaha sideed characters xiran lugta nooca, awoodda qasbo waa wanaagsan yahay, xasilooni dheeraad ah, si wax ku ool u taageeri karaan Ayaxaasi danbe ku listo la taaban karo saameynta loading dhululubo.
B. nidaamka ku listo
1.pumping nidaamka la isticmaalayo φ160 dhululubo la taaban karo, stroke 1.2m, dhululubo dhululubo φ100 ugu weyn dhexroor. (30 tarooli)
2. listo nidaamka Haydarooliga isticmaalaya 55KW afar tiir 130ml motor / r barakac hagaajin ah bamka ugu weyn + 45ml / r
bamka variable (taxane Rexroth)
3.Beerta waalka ugu weyn ee ay ansixiyeen waalka sideed-line saami (BARMAG), taas oo uu leeyahay shaqo Beddelashada variable ka variable. Marka wareegaya hab variable, waalka korontada saami bamka variable ku shuban-xasaasi kartaa sida ay tallaabo hadda iyo load, Hanuunin variable saarka bamka variable, si loo gaaro ujeedada tamarta.
1. stroke dheer, jeer ka yar ee commutation, saamayn yar gaadiidka, Degenaansho yar, dusha jet waa nadiif, siman, si sahlan tahay in la xakameeyo.
2.130ml / r barakac hagaajin ah bamka ugu weyn, isticmaalka tamarta yar, isku halaynta sare, cimri dheer, barakac ku filan.
3.45ml / r bamka variable, sida ay xawaaraha ficilka iyo Ilodanimada inayan size ee barakaca wax soo saarka, yareeyo isticmaalka tamarta, isuduwidda ficil iyo xasiloonida.
4.less bedesheen jeer, samaysaa waslad khafiifa koob, jarida loop waqti dheer wareegga beddelo. Dhoofinta cadaadis, gaadiidka awoodda wax waa xoog badan yahay, ha ka qaado waxyaabaha, xanibeen halista waxa aad u yaraynaya.
C. kaca ayaa wuxuu qaadanayaa symmetrically diyaarin qaab-dhismeedka
Faa'iidooyinka: kaca waxaa symmetrically diyaarin leh qaab symmetrical. Gacanta telescopic ku xiran yahay in ay gacanta saldhig on dhidibka isku mid. Gacanta telescopic si toos ah ugu xiran in ay gacanta saldhig dhex pin ah. No gacanta xira, ma ciidanka lateral, ma fiirsashada stress, ma dhici Daal arrinkaas, sidaa darteed nidaam kaca waa ka xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
kaca ah isu bedbeddelaan baalasheeda by motor lulid xira, ka dibna duuli gacanta ku xidhmaan farsamo noqontay ah, isu bedbeddelaan kartaa ± 45 °.
Faa'iidooyinka: Swing xagal lulid gacantiisiina waa weyn, xasiloonida xoog leh, ayaa kordhin kara dabacsanaan ah ee farsamo jet ah si loo hagaajiyo meesha hal sprayable, ma aha oo kaliya dusha buufiyo waa ka siman, qurux badan, laakiin sidoo kale yareeyo jeer wareeg ujawaab, la kordhiyo xasiloonida ee kaca ah
gacanta Telescopic afar BS700-xoog sare saxan bir welded ka dib markii alxanka, goysyada Weld leeyihiin bar dhabta ah, hubeeyo guud ahaan kororka qallafsanaan
Faa'iidooyinka: steel-xoog sare oo ganacsigii ka dhigi gacanta telescopic ee gobolka hawlgal lagu buufiyo qoyan, Ilodanimada inayan jitter yar yahay, xasilooni wanaagsan, hagaajin karo tayada dusha buufiyo
F. xoojiyeen farsamo drive Rotary
reducer 1.rotary ansixiyeen nooca turbo farsamo hoos marsho, ratio hoos weyn, awood xoog is-xiro, Xuddunta ah wax soo saarka weyn, hawlgalka siman deggan, isku halaynta sare.
2.rotary giraanta marsho waa weyn, dhexroor duuban yahay 760mm, dusha ilkaha ka dib markii loo demin, chrome iyo technology kale post-processing, xoog sare, ma u nugul ifafaale ilig.
3.Adopts si fiican u yaqaan brand Rotary motor, barakac ballaaran, Xuddunta, xasiloonida wanaagsan, in gacanta saxda ah ee waalka saami, wareeg ah oo aan arrin jitter.
nidaamka xakamaynta G.Electrical
1.Contactor la Schneider (Schneider)
2.DC korontada isticmaalaya Siemens (Siemens)
xakamaysada ah inta jeer 3.Beerta isticmaalaa Schneider (Schneider)
4.PLC xakamaysada isticmaalaya Siemens (Siemens)
5.Relay beddelato la Siemens (Siemens)
control 6.Remote qaadanayaa ku magac fiican u yaqaan gudaha, masaafada hago, signal xoog, ma hoos wicitaanada, ifafaale tirada serial.
H.Quick - nidaamka buuxinta wakiilka dejinta
1. bamka xawaaraha kexeeyey by motor inta jeer variable, isticmaalka Schneider gacanta sax inverter deg deg ah-dejinta socodka saarka bamka wakiilka, sida ay ku bam hadda ee xaddiga la taaban karo si toos ah ula qabsadaan xaddiga ku daray.
bamka 2.Accelerator la 2600L / h barakac ballaaran bamka diaphragm, waxaad ku dari kartaa 1000 l of sanduuqa in 20 daqiiqo, aad bay u badbaadiyo waqtiga diyaarinta.
3. xawaaraha bamka la 760L / 2.6Mpa bamka qalab variable, ma fududa in dhaawac, sidoo kale aad u cimri dheer, ka dhigi markii la beddelo, waayo qaybo ka mid deg deg ah ay xirtaan dheer, dhibcood ka yar dhib.
dhuumaha 4.Accelerator ansixiyeen biibiile xiran weyn dhexroor, xitaa xilliga jiilaalka karo xawaaraha dhalmada sidoo kale siman.
Previous: Mine buufin Shotcret bamka HSPJ12 mashiinka
Next: Electric Shotcrete xereen Machine SPJ08-07-22
HZS120 qaybsan la taaban karo warshad isku qasin
Jeclo la taaban karo JBT40-11-56 naaftada bamka
La taaban karo saar HBX40
HZS35 la taaban karo si toos ah geedka la isku qasin